Ungayivakalelwa njani ngokuphila ubomi bakho ngokuphindaphindiweyo?
Ingcamango yokuphindaphinda ngonaphakade ngenye yeengcamango ezidumileyo kunye ezithakazelisayo kwifilosofi kaFriedrich Nietzsche (1844-1900). Kukhankanywe okokuqala kwicandelo le-IV ye -Gay Science , aphorism 341, enegama elithi 'Ubunzima obukhulu.'
Kutheni, ukuba imini okanye ubusuku idemoni yayiza kuba emva kwakho kwedwa yedwa yedwa kwaye ithi kuwe: "Lobu bomi ngoku uhlala kuyo kwaye uphile, uya kufuneka uphile ngokuphindaphindiweyo kunye nokuphindaphindiweyo kwexesha; akuyi kuba yinto emitsha kuyo, kodwa yonke intlungu kunye novuyo kunye nayo yonke ingcamango kunye nokububula kunye nezinto ezincinci okanye ezincinci ebomini bakho kuya kufuneka zibuyele kuwe, zonke zilandelelana kunye nokulandelelana-nokuba le ngqungquthela kunye nokukhanya kwenyanga phakathi imithi, kunye nalo mzuzu kunye nam ngokwam. I-hourglass engapheliyo yokuphila iphendulelwe ngokuphindaphindiweyo, kwaye wena kunye nayo, ingqungquthela yothuli! "
Ngaba awuyikuphosa phantsi kwaye ugqubuthe amazinyo akho uze uqalekise idemoni eyathetha njalo? Okanye ngaba uye wafumana umzuzu omkhulu xa ubungamphendula wathi: "Wena unguthixo kwaye andikaze ndive nantoni na ngakumbi." Ukuba le ngcamango ifumanekile kuwe, izakuguqula njengokuba ukhona okanye mhlawumbi uyanqumla. Umbuzo kuyo yonke into, "Ngaba unqwenela oku kwakhona kunye nokuphindaphinda ixesha?" yayiza kulala kwizenzo zakho njengobunzima obukhulu. Okanye ukhe uhlanjululwe kakuhle kangakanani ukuba ube ngokwakho kwaye ebomini unganqweneli ngokunyanisekileyo kunoko ukuqinisekiswa okusisigxina okungapheliyo kunye nophawu?
U-Nietzsche wabika ukuba ingcamango yafika kuye ngokukhawuleza ngolunye usuku ngo-Agasti 1881 xa wayemisele ngxondorha enkulu xa ehamba ecaleni kwechibi likaSilvaplana eSwitzerland. Emva kokuyifaka ekupheleni kweSayensi yeGay , yenze enye ibe yinto "yokubamba ngokusisiseko" yomsebenzi wakhe olandelayo, ngoko ke i-Spoke Zarathustra . I-Zarathustra, umfanekiso ofana nomprofeti ovakalisa iimfundiso zikaNietzsche, ekuqaleni, unqikaza ukucacisa le ngcamango, kwanaye. Ekugqibeleni ke, uvakalisa ukuphindaphinda ngonaphakade njengenyaniso evuyisayo, eya kwamkelwa ngumntu othanda ubomi ngokuzeleyo.
Ukuphindaphinda okungapheliyo akubonakali nakweyiphi na ye-Nietzsche eyapapashwa imisebenzi emva kweSo Spoke Zarathustra . Kodwa ekuqokelelwa kwamanqaku atyathelwe ngu-Elizabeth wase-Elizabeth ngo-1901 phantsi kwesihloko esithi Intando Yamandla , kukho lonke iqela elinikezelwe ngokuphindaphindiweyo. Kule nto, kubonakala ngathi u-Nietzsche wancinci ngokuqinisekileyo ukuba imfundiso iyinyaniso.
Waye wacinga ukubhalisa kwiyunivesithi ukuba afunde i-physics ukuze aphande imfundiso yenzululwazi. Kodwa ke, kubalulekile ukuba akalokothi agxininise inyaniso yakhe kwimibhalo yakhe epapashwe. Kuvezwa, kunoko, njengoluhlobo lokuzama ukuzama ukuvavanya isimo sengqondo ebomini.
Isisombululo esisisiseko sokuphindaphinda ngonaphakade
Ingxabano kaNietzsche yokuphindaphinda ngonaphakade ilula. Ukuba inani lemandla okanye amandla kwindalo yonke iphela, ke kukho inamba ehamba phambili yezinto eziza kulungiswa kuyo yonke indawo. Eminye yalezi zizwe ziza kwenza umlinganiso, apho imeko yonke iphela iya kutshintshintsha, okanye utshintsho luhlala luqhubeka kwaye luhlala luhlala. Ixesha alipheli, zombini phambili nangemva. Ngoko ke, ukuba indalo iyakwazi ukungena kummandla wokulingana, bekuya kwenzeka kakade, kuba kungakanani ixesha elingenamkhawulo, yonke into yayingenzeka. Ekubeni ngokucacileyo asikafiki kwisizwe esisigxina, asiyi kuze. Ngako oko, iphela indalo iguquguqukayo, ingapheliyo ngokulandelelana kwamalungiselelo ahlukeneyo. Kodwa ekubeni kubakho inani eligqityiweyo (nangona likhulu kakhulu), kufuneka bahlale bephindaphinda rhoqo, bahluke ngamaxesha amakhulu exesha. Ngaphezu koko, kufuneka ukuba sele sele ehamba ngenani elingapheliyo lamaxesha adlulileyo kwaye uya kwenza kwakhona inani elingapheliyo lamaxesha ezayo. Ngenxa yoko, ngamnye wethu uya kuphila ubomi obomi kwakhona, ngoku njengokuba sisiphila ngoku ngoku.
Ukutshintsha kweengxabano kuye kwabakholwa ngabanye ngaphambi kweNietzsche, ngokukodwa ngumlobi waseJamani uHeinrich Heine, ososayensi waseJamani uJosn Gustav Vogt, kunye no-Auguste Blanqui wezobupolitika baseFransi.
Ngaba I-Nietzsche Ingxabano Ngokwesayensi?
Ngokwe-cosmology yanamhlanje, indalo, equka ixesha kunye nendawo, yaqala malunga nama-13.8 amabhiliyoni eminyaka edlulileyo kunye nesiganeko esibizwa ngokuba yiBig Bang . Oku kuthetha ukuba ixesha alilitholiyo, elikhupha iplanki enkulu esuka kwingxabano kaNietzsche.
Ekubeni i-Big Bang, ihlabathi liye landa. I-cosmologists yamashumi amabini anamashumi amabini anqabile ukuba, ekugqibeleni, iya kuphelisa, emva koko iya kuhlabalala njengoko yonke into ebonakalayo kwindalo yendalo ikhutshwe kunye kunye nobunzima, ekhokelela kwi-Crunch Big, eya kubangela enye iBang Bang kwaye kwi- ad infinitum . Le ngcamango yendalo yonke ihamba ngokugqithiseleyo ngcamango yokuphindaphinda ngonaphakade kodwa i-cosmology yangoku ayiqali ukuba i-Big Crunch. Kunoko, izazinzulu ziqikelela ukuba indawo yonke iya kuhlala ikhula kodwa iya kuba yindawo ebandayo, ebumnyama, kuba akusayi kuphinda kubekho amafutha ezinkwenkwezi-isiphumo ngezinye izikhathi esibizwa ngokuthi i-Big Freeze.
Indima ye-Idea e-Nietzsche's Philosophy
Kwinqanaba elikhankanywe ngasentla kwiSayensi yeGay, kubonakala ukuba uNietzsche akafaki ukuba imfundiso yokuphindaphinda ngonaphakade iyinyaniso. Kunoko, uyasicela ukuba sicinge njengokuba kwenzeka, kwaye sizibuze ngendlela esiya kuphendula ngayo ukuba kuyinyaniso. Ucinga ukuba isenzo sethu sokuqala siza kuphelelwa lithemba: imeko yomntu ibuhlungu; ubomi buqulethe ubunzima obukhulu; ngcamango yokuba umntu kufuneka axoxe ngawo onke amanani angapheliyo amaxesha abonakala ngathi ayingozi.
Kodwa ke ucinga indlela eyahlukileyo ngayo. Mhlawumbi umntu angayamkela iindaba, uyifumene njengento enqwenelayo? Oko, utsho uNietzsche, ngaba yiyona nto ibonakalisa ngayo isimo sengqondo sokuqinisekisa: ukufuna le nto, ngayo yonke intlungu kunye nokukhungatheka nokukhungatheka, ngokuphindaphindiweyo. Le ngcamango idibanisa kunye nomxholo ophezulu weNcwadi IV ye -Gay Science , leyo yinto yokuba "ngu-yea-sayer," ummeli-bomi, kunye no- amor fati ( uthando lomntu).
Kwakhona kunjalo nendlela le ngcamango ifakwe kwi- So Spoke Zarathustra . I-Zarathustra ukukwazi ukufumana ukuphindaphinda ngonaphakade kukubonakalisa uthando lwakhe lobomi kunye nomnqweno wakhe wokuhlala "uthembekile emhlabeni." Mhlawumbi le nto yayiza kuyiphendula "i- Übermnesch " okanye "i-Overman" eZarathustra elindele ukuba liphezulu uhlobo lomntu . Ukwahlukileyo apha kukho iinkolo ezifana nobuKrestu, obona eli hlabathi liphantsi komnye, kwaye lo bomi nje ukulungiselela ubomi epharadesi.
Ukuphindaphinda okuphakade kunika ingcamango engafaniyo yokungafi kumntu owathandwa ngubuKristu .
Impucuko ye-Renaissance e-Italy
I-University of Western Washington
Iingoma eziphezulu ezichazwe kwii-80s zeFilimu zengoma
Iimpapasho ezi-10 eziphambili zeTweens
Isakhiwo sokwakhiwa kwezivakalisi kunye namaPrases angaphambili
IsiGama soBume besiNgesi kubafundi